झनै कठिन मोडमा कांग्रेस
बैशाख १९, २०७५ पत्रपत्रिका
काठमाडौं । चुनावी पराजयको जिम्मेवार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भएको ठहर गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको लामो बैठक आइतबार सम्पन्न भयो ।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा चुनावी पराजयको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमै प्रतिस्पर्धी पार्टीको टाउकामा थोपरिएको सायद यो पहिलो नजिर हुनुपर्छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा विन्दुकान्त घिमिरेले लेखेका छन् ।
पराजित खेलाडीले आफ्नो पराजयको जिम्मेवार खेल मैदान तथा प्रतिस्पर्धी खेलाडीलाई ठहर गरेजस्तै वा कुनै सवारी चालकले दुर्घटनाको जिम्मेवार खलाँसी, सडक तथा यात्रुलाई ठह¥याएकै शैलीमा नेपाली कांग्रेसले गरेको यो निर्णयलाई ज्यादै अनौठो मानिएको छ ।
लोकतन्त्रमा यस्तो निर्णय पनि हँुदो रहेछ भन्ने अनुभूति पनि आम नेपालीले गर्न पाएका छन् ।
यो अनौठो निर्णय सर्वसम्मत हो, या बहुमतका आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र अन्योल छ । निर्णयमा कसैले पनि फरक मत दर्ज गराएका छैनन् ।
तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने मुद्दालाई जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला तथा महासमितिको बैठकमा लैजाने बताएर असहमति बाहिर ल्याएका छन् ।
बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर पौडेलले यो कुरा बताइरहँदा अग्रिम महाधिवेशनको माग गर्दै आएको युवा समूहको मौनता निकै रहस्यमय मानिएको छ ।
बैठकमा गगन थापालगायत ६ युवानेताले अग्रिम महाधिवेशनको माग गर्दै ६० पेज लामो दस्ताबेज दर्ज गराएका थिए । उनीहरूको माग पनि बैठकले सम्बोधन गरेन ।
आफ्नो माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा फरक मत दर्ज गर्ने प्रचलन छ । तर, पार्टी पराजयको जिम्मेवार प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई ठहर गर्ने निर्णयमा युवा नेताहरूले समेत लाज नमानी हस्ताक्षर धस्काए ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा भएको करारी हारको समीक्षा गर्दै पार्टीको भावी मार्गचित्र तयार गर्न बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवादबाहेक अरू कुरामा छलफल हुनै सकेन ।
पार्टीको भावी मार्गचित्रसमेत तयार नगरी बैठक समापन गरियो । पार्टी पराजयको जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्ने पौडेल पक्षको अडान र प्रतिस्पर्धी दलका नेता तथा आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि क्रियाशील सदस्यसम्मले पराजयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने देउवा पक्षको अडानका कारण माइन्युट लेख्नसमेत समस्या परेको देखियो बैठकमा ।
शुक्रबार छलफल सकिए पनि ‘माइन्युटमा के कुरा लेख्ने ?’ भन्ने विवादले थप तीन दिनको समय लियो । अन्ततोगत्वा सभापति देउवाले जे अडान राखेका थिए, त्यसलाई चुपचाप स्वीकार गर्न पौडेल पक्ष तथा युवा नेताहरूको समूह बाध्य भएको देखियो ।
प्रकाशित : बुधबार, बैशाख १९, २०७५०९:१९
यस्तो रहनेछ यस वर्षको मनसुन
निर्मला हत्याकाण्ड : एसपी विष्टका छोरा शंकाको घेरामा, कसरी भयो दुई दिन जन्मदिन ?
कहिले खुल्छ पूर्वराजपरिवारको ‘विन्टर प्यालेस’ रत्नमन्दिर ?
३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण: तस्करीको रकम सुरा, सुन्दरी र मोजमस्तीमा
६ सेकेन्ड अगाडि पत्रपत्रिका